घरको यो दिशामा हरेक दिन बाल्नुहोस् बत्ती, आउँछ सुख र समृद्धि – Khabar Silo
Posted on August 4, 2021 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौँ । धार्मिक व्यक्तिहरूले आफ्नो मनपर्ने देवताहरूमा गहिरो विश्वास राख्दछन्। तपाईले आफ्नो इष्ट देवतालाई खुशी पार्न हरेक धार्मिक रितीरिवाजको आफ्नै आफ्नै विधी छन्।
हिन्दू धर्ममा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नु अघि बत्ती बाल्ने गरिन्छ। बिहान र बेलुकाको हरेक दिन पूजामा बत्ती बाल्ने परम्परा छ।
वास्तुशास्त्रमा, बत्तीहरू जलाउने र बत्ती बाल्ने सम्बन्धमा धेरै नियमहरू रहेका हुन्छन्। दीपको ज्वाला कुन दिशामा हुनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा वास्तुशास्त्रमा पर्याप्त जानकारी पाइन्छ। वास्तु शास्त्रले पनि बत्तीको नतीजा कुन दिशामा हुन्छ भनेर बताउँछ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार यदि तपाईले आफ्नो व्यवसायमा नाफाको चाहनाको लागि बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ भने तलब बढ्ने हो भने दिमाग उत्तरमा हुनु पर्छ। उत्तरमा बत्ती जलाउने धनको वृद्धिका लागि लाभकारी मानिन्छ।
दीपको ज्वाला दक्षिणी तर्फ बाल्दा घाटा हुन्छ। घाटा एक व्यक्ति वा पैसाको रूपमा पनि हुन सक्छ। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नु भन्दा अघि बत्ती बाल्ने समयमा यो मन्त्र जप गरेमा छिट्टै सफलता मिल्नेछ ।
बत्तीको ज्वाला पूर्व दिशामा राख्दा आयु बढ्छ। बत्ती पश्चिमतर्फ बाल्दा दुख बढ्छ।
भोली नाग पञ्चमी, यसरी पुजा गर्नुहोस शुभ फल प्राप्त हुन्छ
हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमी तिथिलाई नाग पञ्चमी पर्वका रुपमा नागकाे पुजा गर्ने शास्त्रीय नियम रहिआएको छ । यसवर्ष श्रावण १० गते शनिबार नाग पञ्चमी पर्व परेकाे छ । शास्त्रीय विधिअनुसार पुजागरिएकाे नागकाे प्रतीक घरकाे मुख्य द्वारमा टासेमा बर्षभरि नै नाग अर्थात् सर्पाकाे भय नहुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । भगवान् शिवकाे प्रिय महिनाका रुपमा […]
Posted on January 10, 2021 Author khabar silo
शास्त्रले मानिसको जीवन पद्धतिका विषयमा सवै जानकारी दिएको हुन्छ । कुन दिन के काम गर्ने ? के गर्दा जीवनमा सफलता मिल्छ ? के कस्ता काम गर्नुहुँदैन ? लगायतका यावत विषयमा धर्मशास्त्रमा सविस्तार वर्णन गरिएको पाइन्छ । जसले मानव जीवनलाई संस्कारी बनाएको हुन्छ । आज आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा आइतबारका दिन केही महत्वपूर्ण कार्य गर्नाले उसले […]
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत : ॐ लेखि शेयर गर्नुहोस्
Posted on July 5, 2021 Author khabar silo
राजधानीको दक्षिणकाली नगरपालिका–१३ स्थित कटुवाल दहमा नाग देखापरेको छ । बाग्मती नदीमा बनेको ‘कटुवाल दह’ भन्दा केही मिटरमाथि गत पुस २९ गते नाग पहिलो पटक देखापरेको थियो ।स्थानीयका अनुसार त्यस यता नाग लगातार निस्कने गरेको छ । ‘दिनमा चार पटकसम्म निस्कन थालेको छ’ स्थानीय पञ्च बहादुर लामाले भने ‘चैत ४ गते त पटक–पटक गरेर चार […]
नेपालमा भेटियो सुनौलो क*छुवा, ॐ लेखी संसारभर सेयर गरौं